Gantaalada Guriga Lagu Sameeyo - Ikkaro
Waxaan fureynaa qeyb aan kagahadleyno adduun cusub, oo ah gantaalada guryaha lagu sameeyo.
Hawada internetka Waxaan soo maray noocyo badan oo ah gantaallo macmal ah, qaar badan oo aad u fudud oo xariif ah; gantaallo lagu sameeyay kabriid biyo iyo dhalooyin caag ah iyo kuwa kale oo aad u casriyeysan halkaasoo farsamo dheeraad ah looga baahan yahay.
Waxaan haynaa fursado badan oo aad u fudud, ikhtiyaarro hal abuur leh oo aan u adeegsano inaan carruurta wax ku baro. Ma waxaad u rabtaa gantaal guryaha lagu sameeyo oo loogu talagalay carruurta? Oo maxaa kaloo dhaca? Maxayna sameyn karaan (kormeerkaaga dabcan? Hagaag, ha moogaanin iskuxirayaasha qeybta.
Waxaad raadineysaa wax ka daran ... waa hagaag, waxaan horey u haysannay gantaallada biyaha. Ma ogtahay inay dhererkoodu gaarayaan 500 mitir?
Waxaa jira gantaallo DIY ah oo aan waxba ka hinaasin wax soo saar warshadeed. Waxaan heli karnaa sida loo sameeyo shidaalka gantaalka. Runtii maadooyin xiiso leh, in kasta oo ay tahay in si taxaddar leh loola dhaqmo maxaa yeelay waxay noqon karaan maadooyin khatar ah.
Waan jeclahay inaan wax ku tuuro hawada waxaanan jecelahay inaan sameeyo casharro tallaabo-tallaabo ah.
Gantaalladu waa muujinta tiknoolajiyadda sare. Markuu arko mashaariicda dadku jecel yihiin
Waxaan u maleynayaa inay tahay qeyb wanaagsan oo waxyaabo badan la baarayo ...
Gantaal khamri ah
En kanaalka youtube ee khamriga, waxaan ka heli karnaa dhowr tijaabo oo lagu qaaday aalkolo.
Tani way fududahay Gantaal khamri ah waxay soo jiidatay dareenkeyga. Safka gantaallo aad u fudud oo la sameeyo sida gantaalka ciyaarta ama midka bacda shaaha. Waa ciyaaro aan la ciyaari karno carruurteenna, annagoo had iyo jeer u sharraxeyna khataraha ay leedahay isticmaalka dabka iyo qaadista tallaabooyinka lagama maarmaanka ah. Ha la samayn iyaga haddii aad u malaynayso inay isku dayi doonaan markay keli yihiin ama saaxiibadood la joogaan. Waxaad ka taqaan caruurtaada qofkasta oo kale.Faa'iidada waxqabadka waa abuurista xiisahaas, xiisahaas, taas oo ka dhigaysa inay rabaan inay sii wadaan barashada iyo tijaabinta.
Markan waxaan u baahanahay oo keliya
dhalo caag ah,
Gubashada aalkolada, nooca ay ku iibiyaan dukaamada waaweyn ee buluugga ah
Aalkolo ayaa lagu shubaa dhalada waanan faaruqinaa. Ka dib waxaan u dhigeynaa booska oo waxaan u soo dhajineynaa nalka dabka godkiisa. Marka hadhaaga, qaddarka yar ee khamriga ee ku hadhay gudaha gidaarada ayaa shidi doona oo riixi doona dhalada.
Waxaan kuu dhaafayaa dhowr fiidiyow.
Gantaal shandad shaah wata
Waxaan dhihi karnaa waa gantaalka ugu fudud adduunka. Waxaad u baahan tahay oo keliya warqadda bac shaaha ... Akhri akhriska
Gantaal guriga lagu sameeyo oo ay ku jiraan kabriid
Waxaan arki doonnaa gantaallo la socda. Kuwani waa gantaallo fudud oo lagu riixo oo lagu sameeyay ... Akhri akhriska